Buffon: Waa aflagaado in aad aniga iyo Neuer is bar bar dhigtaan – Gool FM
Klopp oo ku war galiyay maamulka kooxda Liverpool, sida ay muhiim ugu tahay saxiixa mid ka mid ah xidigaha Barcelona
Buffon: Waa aflagaado in aad aniga iyo Neuer is bar bar dhigtaan
Kaafi July 2, 2016
(Paris) 02 Luulyo 2016. Kabtanka Italy Gianluigi Buffon waxa uu ku adkeystay in aysan jirin kala wacnaansho badan marka uu ka hor yimaado Manuel Neuer, Goolhaye uu mar ku tilmaamay “In uu isagaba ka wacan yahay,” Sabtida.
Buffon iyo Neuer waxa ay kala joogi doonaan biraha kala fog ee iska soo hor jeeda marka ay Azzurri fooda darto dalka haysta koobka aduunka.
“Waxaan sheegay in Neuer iga wanaagsan yahay, maxaa yeelay ugu dambeyn run bey noqon kartaa,” ayuu yiri. “Ma aha wax I dhibaya ama iga hoos marinaya waxa aan ahay. Aad ayaan uga war qabaa waxa aan ahaa, oo aan hada ahay, iyo meesha aan laba sano kaddib joogi doono, waxa ay iga dhigtaa in aan xasilooni dareemo.
“Waa aflagaado in lala bar bar dhigo goolhaye 38 jir ah. Waxa ay u muuqata in ay caadi tahay bixinta jawaabahan, afartii ilaa iyo shantii sano ee ugu dambeysay, waxa uu isku muujiyey in uu yahay goolhaye aad u wanaagsan marka dhinac walba laga eego.”
Buffon waxa uu qiray in wiilasha Conte ku wajahayaan xaalad adag oo lagu riixi doono sameyn waxa ugu dambeya.
“Ma jirto wado kale oo aan ahayn isku dayida horumar si aad fursad isu siiyo in aad gudubto oo aad riyadaada ka dhigto mid soo socota.
“Marka aad eegto dhinaca aan wajahayno waxaan ognahay sida ay u adkaan doonaan. Waa kulan dhiig jiri doono, dhidid iyo ilin, dareenka iyo quwada jirka meesha ugu dambeysa ayaa la gaarsiin doonaa laakiin aad ayaan ula soconaa midaas waana muhiim kahor inta aynu ciyaarta la tagin.
“Dabcan aaminaad ayaad qabtaa marka aad tartanka bartamaha ka joogto, ha ahaato koob aduun ama koobka qaramada qaarada Yurub, iyo marka aad garaacday Belgium, Sweden iyo Spain.
“Aad ayaan ula soconaa waxa aynu sameneyno waana qabnaa aaminaad weyn.”
Buffon waxa uu ciyaaray laba afar dhamaad oo ay Germany ka hor yimaadeen, koobkii aduunka 2006 iyo Euro-gii 2012, labadaba Italy ayaa adkaatay, dabcan, Germany wali Azzurri kuma garaacin tartan weyn.
Isaga oo is bar bar dhigaya kulamadaas iyo midka sabtida waxa uu yiri: “Cabsi badan ayaa jirtay 2006. Waxa ay ahayd afar dhamaadka koobka aduunka iyo ka hor taga dalkii marti galinayey, sidoo kale waxaa jiray qodob aynu rabnay in aan u cadeyno Talyaaniga qurbaha ka dheela.
“Taas ayaa runtii ciyaarta saameyn ku lahayd maalin kahor kulanka.
“Anaga ma ahayn kuwa kulankii 2012 ku cad cadaa waxa aynu u baahnayn la imaanshaha wax gaar ah si aan u gaarno fiinaalaha oo aan wax taariikhi ah u sameyno.
“Kulanka sabtida marka ay timaado, waxaa jira arimo badan oo la siman Euro-gii 2012, saadaasha, iyo farqiga ayaa xitaa wax weyn noqon kara maadaama ay yihiin ku guuleysteyaashii koobkii aduunka.”
Kooxdee ayuu ku biiray Wiilka uu dhalay Macallin Jose Mourinho? + Sawirro
Ozil oo diyaar u ah soo af jaridda cuqubada Germany ka haysata Italy